काठमाडौं : विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या १ करोड ७४ लाख ७६ हजार १०५ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै २ लाख ९० हजार भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन् । यस्तै, मृत्यु हुनेको संख्या पनि ६ लाख ७६ हजार ७५९ पुगेको छ । हालसम्म १ करोड ९ लाख ३९ हजार भन्दाधेरै उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ४६ लाख ३४ हजार ९८५ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा अमेरिकामा ६७ हजार नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । त्यहाँ हालसम्म १ लाख ५५ हजार २८५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
चीनमा पछिल्लो २४ घण्टामा १२७ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । त्यहाँ हालसम्म ८४ हजार २९२ जना संक्रमित हुँदा मृतकको संख्या ४ हजार ६३४ छ । जापानमा ३३ हजार ४९ जना संक्रमित हुँदा १ हजार ४ जनाको ज्यान गएको छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म १९ हजार ५४७ जना संक्रमति फेला पर्दा १४ हजार २४८ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । ५२ जनाको भने मृत्यु भएको छ ।
सेन्चुरी बैंकको खुद नाफा ३४% वृद्धि, वितरण गर्न मिल्ने नाफा कति ?
कठिन परिस्थितिमा पनि खस्किएन नेपाल लाइफको वित्तीय अवस्था
लघुवित्तका २१ कम्पनीलाई चौथो त्रैमास कस्तो भयो ? हेर्नुहोस् तथ्यांक
एक अर्बको कारोबार हुँदा समेत नेप्से सूचक किन पर्यो दबाबमा ?